कामना सेवा विकास बैंकका एकैदिन थप २ नयाँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा प्रदेश नं ३ अन्तर्गत काठमाण्डौको काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्थित स्वयम्भूमा र भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका–७ स्थित जगातीमा आज एकैदिन १२६औ र १२७औ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार सुरु गरेको छ। हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तोकेको...
ललितपुरको नख्खु दोबाटोमा कामना सेवा विकास बैंकको १२५ औँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा प्रदेश नं ३ अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित नख्खु दोबाटोमा आज असार ६ गतेबाट आफ्नो १२५औ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ। हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले भिडियो कन्फरेन्स...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कामना सेवा विकास बैंकले अधिकांश वित्तीय सूचकमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १७२.०१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद...
कामना सेवाद्वारा अटो व्यवसायीलाई क्यूआर वितरण
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नगदरहित कारोबार नीतिलाई कार्यान्यवन गर्ने/गराउने मुख्य उद्देश्य तथा आमनागरिकमाझ डिजिटल बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देही जिल्लाको बुटवलस्थित बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एशोेसियसनको रजतजयन्ती तथा २५ औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा उक्त एशोसियनमा आवद्ध...
कामना सेवा विकास बैंक मध्यमस्तरीय उत्कृष्ट करदाताका रुपमा सम्मानित
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत मध्यमस्तरीय उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ। कर दिवसका अवसरमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करदाताहरुमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेको कामना सेवा विकास बैंकलाई...
अब क्षणभरमै घरबाटै कामना सेवाको अनलाइन खाता खोली कारोबार गर्न सकिने
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले ‘केएस इन्स्टा’ नामक एक नवीनतम अनलाइन बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्राहकले बैंकको वेबसाइटमार्फत केही मिनेटमै यो खाता खोल्नुका साथै वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सक्नेछन्। उच्चतम ब्याजदरसहितकोे यो विशेष बचत खातामा पहिलो वर्ष निस् शुल्क मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको ...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले निष्कासन गरेको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिन आज बिहीबार (फागुन ६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत माघ २२ गतेदेखि रु. १ हजार अंकित दरका १० लाख इकाइ भएका ‘९% केएसबीबीएल डिबेन्चर–२९८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री...
कुमारी बैंकलाई ऋणपत्र निकाल्न इक्राले दियो यस्तो रेटिङ
काठमाण्डौ। इक्रा नेपाल लिमिटेडले कुमारी बैंक लिमिटेडलाई विगतमा प्रदान गरेको रेटिङहरुलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। इक्राले कुमारी बैंकलाई ऋणपत्र निकाल्न एलबीबीबी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको हो। यो रेटिङ प्राप्त गर्ने उपकरणहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन्। यस्ता निकाय तथा उपकरणहरुमा मध्यम...
कामना सेवा विकास बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले निष्कासन गरेको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा अब फागुन ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ। बैंकले गत माघ २२ गतेदेखि रु. १ हजार अंकित दरका १० लाख इकाइ भएका ‘९% केएसबीबीएल डिबेन्चर–२९८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रको निष्कासन छिटोमा आज माघ ६ गतेबाट बन्द हुने भनिएको थियो। तर...
कामना सेवा विकास बैंकको रु. १ अर्बको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आज माघ २२ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका १० लाख इकाइ भएका ‘९ प्रतिशत केएसबीबीएल डिबेन्चर–२९८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये ६ लाख इकाइ व्यक्तिगत तवर र बाँकी ४ लाख इकाइ सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको हो। यो ४ लाख...
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा कन्ट्याक्टलेस कार्डको सुरुआत
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकको हितलाई मध्यनजर गर्दै कन्ट्याक्टलेस भिसा डेबिट कार्डको सञ्चालनमा ल्याएको छ। नियर फिल्ड कम्युनिकेसन (एनएफसी) मा आधारित उक्त कार्ड एनएफसीयुक्त अर्थात ट्याप सुविधा भएको पीओएस मेसिनहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रविधिमा मेसिनभित्र कार्ड नराखी एउटा सीमित दूरीबाट पीओएस मेसिनमा ट्यापमात्र...
कामना सेवाले ल्यायो वीच्याट–युनियन पे भुक्तानी सेवा
काठमाण्डौ। कामना सेवा विकास बैंक र फर्स्ट पे टेक्नोलोजी प्रालिबीच वीच्याट पे र क्यू पेको भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। बैंकले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै वीच्याट पे र युनियन पेबाट हुने भुक्तानी स्वीकार गर्न यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस सम्झौतापश्चात नेपाल आउने पर्यटक तथा स्वदेशी ग्राहकले कामना सेवा...
कामना सेवा विकास बैंकको रु. १ अर्बको ऋणपत्र माघ २२ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले यही माघ २२ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका १ अर्ब रुपैयाँबराबरको १० लाख इकाइ भएका ‘९ प्रतिशत केएसबीबीएल डिबेन्चर–२९८७’ नामक ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। कुल इकाइमध्ये ६ लाख इकाइ व्यक्तिगत तवर र बाँकी ४ लाख इकाइ सर्वसाधारणलाई बिक्री...